Oomatshini abathengisa abangaqhelekanga abangama-30 ehlabathini, wakha wayisebenzisa loo nto?
Oomatshini abathengisa abangaqhelekanga abangama-30 emhlabeni, wakha wayisebenzisa loo nto?
kwizimvo:51 umbhali: Ixesha lokushicilela: 51 imvelaphi:
Ngaba ucinga ukuba kukho ukutya okulula kuphela koomatshini abathengisayo? Yimpazamo enkulu, iikeyiki, iiteki, oononkala, icuba, icaviar, imivalo yegolide… Kuphela okungalindelekanga, akufumaneki.
Naba oomatshini abathengisa abangaqhelekanga abangama-30 ekuthi i-Business Insider iqokelele kwaye isasaze kwihlabathi liphela.
1. Kwizitrato zaseNew York, eLos Angeles naseDallas, kukho iiyure ezingama-24 zekhekhe zokuthengisa oomatshini. Ungathenga iikeyiki ezimnandi ezinje ngeshokholethi ye-marshmallows ngamakhadi etyala.
2. Umatshini wokuthengisa oononkala abasebatsha banokufunyanwa kwisikhululo sikaloliwe esingaphantsi komhlaba eNanjing, China. Oku ikwangunonkala ophilayo wokuthengisa umatshini e-China, othengisa umndilili wee-crabs eziphilayo ezingama-200 ngosuku.
3. E-Taiwan, abantu banokuthenga iimaski zonyango koomatshini abathengisa, ngakumbi ngexesha lokuqhambuka komkhuhlane weentaka.
4. Kwiindawo ezininzi zehlabathi, kubandakanya le hotele e-Abu Dhabi, kukwakho noomatshini abathengisa igolide.
5. Beka ingqekembe kumatshini wokuthengisa eTokyo, kwaye umntu wokwenene uya kukunika ilekese. Nangona kuchasene nomba wokurhweba ngabantu ngokuzenzekelayo, kukwalonwabisile.
6. EJapan, abantu banokuthenga ikofu enkonkxiweyo kumatshini wokuthengisa esitratweni waseSuntory.
7. Umbono wokucoca ulusu uhlala uvela xa usiya kwigumbi lokuhlambela kwaye uzijonge esipilini. Ukuba uhlala eHollywood, eCalifornia, ungabuyela ku-Proactive ukulungisa umatshini wokuthengisa.
8. Umatshini wokuthengisa ozenzekelayo wobisi oluhlaza oluluhlaza unokufumaneka kumbindi weLondon, apho abalimi bongeza ubisi oluhlaza kumatshini wokuthengisa kwaye baluthengise ngqo kwiifama ukunqanda isithintelo kwintengiso yobisi oluhlaza kwiivenkile zaseBritane.
9. Ukuthenga ilekese kumatshini wokuthengisa ePuerto Rico unokufumana ityhubhu yasimahla yeColgate intlama yamazinyo. Kwangelo xesha, igama elithi "Ungalibali ukuxubha amazinyo akho" liya kubonakala kwiscreen se-LED. I-Colgate ihambisa imiyalezo yezempilo ngale ndlela.
10. Kwimpuma yedolophu yedolophu iVancouver, ungafumana umatshini wokucoca ulwelo njengesixhobo senkonzo yoluntu ukubuyisela ezakudala ukuthintela ukusasazeka kwezifo.
11. Emva kovavanyo lwenkxaso yabafundi abangama-85%, iYunivesithi yaseSpensburg, ePennsylvania, yazisa ngoomatshini bokuthengisa iziyobisi bePlani B, kunye nezinye izikolo, ezinjengePomona College, ziyakhuphisana nazo.
12. Umatshini wokuthengisa imali nge-elektroniki wase-Bhritane wamiselwa kwi-cafe ekufutshane ne-Small Silicon Valley Technology Centre eMonti nge-Matshi ka-2014. Ngalo matshini wokuthengisa, iBitcoin inokutshintshiselana ngemali yamaphepha.
13. ELos Angeles, abantu abalambileyo banokuthenga iirandi zaseMexico ezishushu esele zilungile koomatshini abathengisa nge- $ 3, kubandakanya iisoseji zaseSpain, iitapile ezibhakiweyo, ibhekoni yoqobo, iitapile kunye nenyama yenkomo eyosiweyo.
14. Inkampani eyenza itillafillas yaseMexico yenza nomatshini wokuthengisa ipitsa osebenzisa i-oveni ukwenza ipitsa eyi-intshi ezi-10 kwimizuzwana engama-90.
15. IFriji yoMfama, isiqalo saseChicago, ifaka iisaladi kwiitoti ezitywiniweyo kwaye zizithengisa koomatshini abathengisa, ziqala nge- $ 8.
16. IBrooklyn, eNew York, inomatshini wokuthengisa ozenzekelayo obizwa ngokuba yiSwap-o-matic, ovumela abantu ukuba bathengise izinto ezingafunekiyo bezitsha ngaphandle kwemali.
17. Ukunceda abathengi abantsonkothileyo, lo matshini wokuthengisa icigar uthengisa ukuya kuthi ga kuma-25 eemveliso ezahlukeneyo zeecigars ezikumgangatho ophezulu ezingeniswe kwamanye amazwe ngamaxabiso asusela kwi- $ 2 ukuya kwi- $ 20.
18. Umatshini wokuthengisa we-caviar kwimall eLos Angeles ubiza phakathi kwe- $ 5 kunye ne- $ 500 ngeyunce.
19. I-Champagne ithengiswa kumatshini wokuthengisa eLondon. Iibhotile zepokotho zixabisa i-29 yeebhotile kwibhotile.
20. Ngexesha leNdebe yeHlabathi ka-2014, kwafakwa umatshini wokuthengisa oluzenzekelayo eSao Paulo Metro Station ukuthengisa iiyunifom yeQela leSizwe leBhola ekhatywayo laseBrazil, ukuququzelela abalandeli abanempambano.
21. IHangzhou, China, inomatshini wokuthengisa imoto omkhulu kakhulu. Ixabisa kuphela i-3 yuan ngeyure ukuqesha imoto. Nangona isantya esiphezulu ziimayile ezingama-50 kuphela, izithuthi zombane zinokunciphisa kakhulu ungcoliseko lwesithuthi.
22. ICalifornia, enelayisensi yentsangu yezonyango, inomatshini wokuthengisa intsangu, olula njengokuthenga ibhegi yeetshiphusi. Ixabisa i $ 15 ukuya kwi-20 yeedola ngengxowa kwaye inokuthengwa emva kweeyure ezimbalwa zokuskena ngeminwe.
23. I-Coca-Cola yejusi yelamuni yaseSpain yohlobo lweLemon kunye neNad inokuthengwa ngamaxabiso ahlukeneyo kwimimandla eyahlukeneyo. Ijusi yelamuni inokuthengwa koomatshini abathengisa ngamaxabiso aphantsi kwimozulu eshushu.
24. E-France, umbhaki wazisa ngoomatshini ababini abathenga intonga. Abalandeli banokuthenga iintonga ezintsha iiyure ezingama-24 nangaliphi na ixesha, nokuba kusebusuku.
25. Ukunxiba izihlangu eziphakamileyo ukuya kwitheko lasebusuku kunokuba buhlungu. Oomatshini abathengisayo abathengisa izihlangu ezithambileyo nezitofotofo eCalifornia naseLas Vegas basombulula iingxaki zabafazi.
26. Ukulungiselela ukukhuthaza iintsuku ezibalekayo, uphawu lwezihlangu zemidlalo iNew Balance, ngentsebenziswano neWestin Hotel, yasungula umatshini wokuthengisa othengisa izixhobo ezisebenza simahla (ezixabisa i-150 leedola). Abathengi kufuneka babhale kwikhompyuter phambi komatshini wokuthengisa ngeTwitter: "Ndifuna njalo [imeyile ikhuselwe]#Suku lokuSebenza leSizwe ".
27. IAmazon, isigebenga se-e-commerce, nayo ingenile kwimakethi yomatshini wokuthengisa, iseta oomatshini bokuthengisa ngomlilo kwi-Kindle Fire e-McCarran Airport eLas Vegas ukuze ithengise ii-e-readers kunye nezinye izinto kubakhenkethi abangenalo ulonwabo.
28. umatshini wokuthengisa ongaqhelekanga awuyonto intsha. Ngo-1949, kwabakho umatshini othengisa elangeni onemilomo yokutshiza, kunye nemizuzwana engama-30 yokutshiza yaxabisa iisenti ezi-1 kuphela.
29. Usomashishini waseFiladelfiya uMarvin Kilgore waqesha oomatshini abangama-40 abathengisa iinwele zabantu ngeerisithi zeenwele zabasetyhini, ezixabisa phakathi kwe- $ 60 kunye ne- $ 250 isiqwenga.
30. Inkampani yaseTurky isungule umatshini wokuthengisa ozenzekelayo othengisa iibhotile ezinokuphinda zisebenze zokutya kwenja kunye namanzi. Xa iibhotile zeplastiki zifakwa kumatshini, ukutya kwenja kunye namanzi kuya kuphuma kunceda izinja ezibhadulayo. Zoomgu wenza imveliso OEM koomatshini elicwangcisiweyo,
ukusuka kwimizobo yoyilo ukuya kwimveliso yesampulu,
emva koko kwimveliso yobuninzi, kunye nophuhliso lwenkqubo, ukumisa,
ukuhombisa imbonakalo, ukusebenza komatshini,
Siza kubonelela ngeenkonzo zokuma kwindawo enye.
Bonke oomatshini banokwenziwa ngokwezifiso kwiZoomgu
Ngaphambili: Indlela ukukhetha oomatshini wokuthengisa?
Okulandelayo: Ukuthengisa okungagunyaziswanga, zeziphi iingxaki iinkampani zorhwebo ekufuneka zithathele ingqalelo!